Shirkadaha Dukaanada Dadweynaha ee Iibka ah - Horeba Diyaar u ah Dadweynaha inay Adeegsadaan
Sida ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee loo maro shirkaddaada dadweynaha u qaad waa inaad iibsato a shirkadda qolofta shacabka. Shirkadda qolofka bulshada waa shirkad horeyba ugu jirtay oo ka diiwaangashan SEC si ay saamikeeda uga iibiso dadweynaha. Waxaan haynaa mid ka mid ah alaabada ugu waa weyn ee shirkadaha shelf ee iibka ah. Waad lahaan kartaa shirkadaada qolofka dadweynaha ama shirkad da 'weyn markay tahay ugu badnaan saacadaha 24.
Ka dib marka aad iibsato mid ka mid ah shirkadahayada dadweynaha ee qolofta leh, dukumiintiyada midaynta ayaa la diyaariyey oo la xareeyay. Markaad ku biirto shirkad gaar loo leeyahay iyo shirkad dowladeed, waxaad haysataa magaca shirkada sii nooleyd. Dukumintigaaga midaynta ayaa ah foomamka sharciga ah ee isku daraya labadaada shirkadood, oo kugu daaya hay'ad sharci u diyaarsan inay ka iibiso saamiyadeeda dadweynaha. Waxyaabaha halkan ku jira ayaa loogu talagalay macluumaad iyo ujeeddooyin waxbarasho oo keliya. Qaar ka mid ah shirkadaha hoos ku taxan ayaa laga yaabaa inaanu (wali) noqon meel dadweynaha laga ganacsado. Boggan looma tixgelin doono inuu yahay soo-iibin ama lagu iibinayo nabadgeliyada. Xawaaladuhu waxaa kaliya lagu meeleeyaa qareen shatiyeysan iyo dillaaliin, sida sharcigu farayo, toosna ugama marsiin shirkaddayada. Raadso talo sharci oo sharciyeysan iyo canshuur.